ua – @mmunited
Network challenge steem steemit ua
It is time to increase your followers
I think this isagreat time to increase your followers. Asasocial network you also needalot of followers in Steemit like other social media platform. I have two reason why we should increase our follwers. The two reasons are: @steem-ua @kiwibot @steem-ua As you already know @steem-ua give upvote based …
steemit steempress ua
ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အတူ − ၂
ဒီပိုစ့်မှာကတော့ adoption အကြောင်းရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adoption ဆိုတာကတော့ မြန်မာလိုပြောရင် မွေးစားတာပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို မွေးစားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Steemit မှာရော adoption ဆိုတာက ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ။ ဒီ အကြောင်းအရာကို ဘယ်သူစရေးသလဲဆိုတာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ Adoption ရဲ့ ပုံစံကွဲတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အဲ့ ဒိထဲကပုံစံအချို့ကိုရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Source Link ဒီနေရာမှာ ပထမဆုံး ပြောချင်တာက SP ၅၀၀ ပြည့်ဖို့ကို လူအတော်များများက အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ SP ၅၀၀ ပြည့်ရင်တော့ minnow ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးမြင်ဖူးတဲ့ adoption ကတော့ မွေးစားခံရတဲ့သူက ကောင်းမွန်တဲ့ပိုစ့်တွေရေးရမယ်။ တစ်နေ့ကို ပိုစ့်တစ်ခုရေးရမယ်။ ပြီးတော့ power down လို့မရဘူး။ ရသမျှ SBD, Steem တွေအကုန်လုံးကို …
Ideas on Steem Blockchain part #7 – Steem-ua
User Authority ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို @scipio နဲ့ @holger80 တို့က စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ ဒိတော့ User Authority ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတာ သိဖို့လိုလာပါပြီ။ User Authority UA ဆိုတာကတော့ google page rank လိုပါပဲ။ Google page rank မှာကျတော့ တစ်ခုခုကို ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလစ်အနှိပ်များတဲ့ website က ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာ နေရာယူပါတယ်။ လူများများကြည့်တဲ့ page လူကြိုက်များတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ Steem-ua ကလဲ အဲ့ဒိလိုပါပဲ။ Follower များတဲ့သူက UA ranking မြင့်ပါတယ်။ ပိုစ့်မှာ ဆိုရင်တော့ upvote များများရတဲ့သူ၊ comment များများရတဲ့သူက ranking မြင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် …